नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका अगाडी मामुली पत्रकारको ‘उपरखुट्टी’ ! ( भिडियो हेर्नुहोस) – " कञ्चनजंगा News "
नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका अगाडी मामुली पत्रकारको ‘उपरखुट्टी’ ! ( भिडियो हेर्नुहोस)
No Comments on नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका अगाडी मामुली पत्रकारको ‘उपरखुट्टी’ ! ( भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं – देशका नागरिक र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले अनुनय बिनय गर्दा पनि भेट्न नपाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतीय विवादित टेलिभिजन जी न्युजका विवादित पत्रकार सुधीर चौधरीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेरै अन्तर्वार्ता लिएका छन्।
रोचक त के छ भने सार्वजनिक भएको फोटोमा प्रधानमन्त्री ओलीसंग सुधीरले चौधरीले ‘उm परखुट्टी’ लगाएका छन् । मर्यादा र साधारण अर्थले पनि प्रधानमन्त्रीको अगाडी ‘उm परखुट्टी’ लगाउने चलन छैन । उक्त फोटोमा प्रधानमन्त्री स्वयं ‘उm परखुट्टी’ लगाएका छैनन्।
देशका पत्रकार र संचारमाध्यमलाई गाm ली गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले सामान्य मर्यादा थाहा नभएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई पटक पटक स्थान दिने गरेका छन् । त्यसैमाथि जी न्युजका सुधिर चौधरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुइलाउने अभियान चलाएका व्यक्ति हुन्।
सुधिरकै च्यानलबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोडेर आm पत्तिजनक समाचारहरू पटक-पटक प्रसारण भएका छन् । यतिसम्म कि चिनिया राजदूत होउ यान्छीसंग प्रधानमन्त्री ओलीले चक्कर चलाएको भन्दै भ्रामक सामाग्री समेत उनकै च्यानलले प्रसारण गरेको थियो।
नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजलगायतले विवादित सामग्री प्रकाशित गरेका थिए । जी न्युजले ‘राष्ट्रवाद के नामपर नेपालकी चाइनिज नक्सेबाजी’ भनेर कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो। जुन कार्यक्रम सुधीरले नै सञ्चालन गरेका थिए।
त्यस्तै सुधीर चौधरीले पनि नेपालबारे विवादित ट्वीट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको मानहानी र दुm ष्प्रचार गरेको भन्दै नेपालका केही मल्टी सिस्टम अपरेटरहरुले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बm न्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्वीट गरेका थिए।
उनले लेखेका थिए, ‘नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बm न्द गरेको छ । यो देश त भारतका न्युज च्यानलका एंकरसँगै डm रायो त । सेना त अघि सर्नै परेन।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सावधानी नअपनाउँदा यस्ता घm टना बारम्बार घm टेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अनुमतिबिना फोटो खिच्न नपाउने नियम छ । कम्तिमा पनि फोटो खिच्दा ‘उपरखुट्टी’ लगाउन नदिएको भए फोटो असभ्य देखिने थिएन । कम्तिमा भारतीयले नेपालीलाई हेm प्ने अर्को बहाना पाउने थिएनन।
← यस्तो एउटा टेलिभिजन जस्ले युवतीलाई ब्रा खोल्न लगाएर मात्र समाचार पढ्न दिन्छ (भिडियो सहित) → मंगलबारका दिन हनुमानको पूजा गर्नाले हुनेछ मनोकांक्षा पूरा